Yamato အက​ြ​ောင်း သိထားသင့်တဲ့ အချက် ၁၂ ချက် – We love Steempress
Home/game/lang/myanmar/nextcolony/steem/steempress/Yamato အက​ြ​ောင်း သိထားသင့်တဲ့ အချက် ၁၂ ချက်
Yamato ကို နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ စတင် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Yamato ဆိုတာကတော့ wonders of the universe ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးပေါ်မှာ အခြေခံ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Yamato ဆိုတာကတော့ တိုက်ခိုက်ရေး ယာဉ်ပျံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို တည်ဆောက်လို့ ရသလို အဆင့်မြှင့်တင်လို့ ရပါတယ်။ Yamato အနေနဲ့ သူများကို တိုက်ခိုက်လို့ရသလို သူ့ကို သူများယာဉ်တွေက လာတိုက်ခိုက်လို့ ရပါတယ်။ Yamato က ဆုကြေးရရှိဖို့အတွက် အဓိကကျတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ဆုကြေးရရှိဖို့အတွက် မိမိရဲ့ Yamato ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ကာကွယ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် အခြားသူတွေရဲ့Yamato တွေကို တိုက်ခိုက်ခြင်း စတာတွေကို ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒိလို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ရလာတဲ့ အမှတ်(reward points) တွေကို ရာသီ ကုန်မှာ Steem, Items, Stardust တွေ အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်ဆုံး ၁၀ ယောက်က အဆင့်အလိုက် Steem တွေ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Yamato module စတင်တဲ့ အချိန်မှာ Legendary ဂြိုဟ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတွေ အားလုံး(စုစုပေါင်း ၁၀ ​ယောက်) Yamato blue print ၁၀ ခုစီ ရရှိမှာ ​ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဂြိုဟ်ပေါ်မှာ အဲဒိ blue print တွေကို အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ် အတွက်လဲ blue prints ၁၀ ခုရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ blue prints 10 ခုကို ပြိုင်ပွဲတွေ ပြုလုပ်ပြီး ပေးဝေသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Yamato bule print ကို သူများကို ရောင်းချလို့ ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဘာသာကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဂြိုဟ်မှာ တပ်ဆင်ပြီးတော့ ထွက်လာတဲ့ အဆင့်မမြှင့်တင်ရသေးတဲ့ Yamato တွေကို သူများတွေကို ရောင်းစားလို့ ရပါတယ်။
Yamato တွေကို ထုတ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ သူနဲ့ သက်ဆိုက်တဲ့ ship skill အဆင့် ၂၀ အထိ ရှိနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ မထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။ အပြီးသတ် ချိန်ညှိခြင်းတွေ ပြုလုပ်နေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်တည်တောက်လိုက် တဲ့ Yamato က အဆင့် ၀ ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ သူ့ကို အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ရင် လယ်ဗယ်မြင့်လာတာနဲ့ အမျှ ဆုကြေးတွေ ရလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့အတွက် resources တွေနဲ့ stardust တွေ လိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲ ရာသီတိုင်းမှာ သူ့နာမည်နဲ့သူ ရှိပါတယ်။ ပထမဆုံး ပြိုင်ပွဲရာသီရဲ့ နာမည်ကတော့ Nemesis ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ရာသီကတော့ ရက် ၃၀ ခန့် ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ ဆိုတာကတော့ ရာသီစတဲ့ အချိန်မှာ သတ်မှတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီတစ်ခုစီတိုင်းမှာ ဆုကြေးဘယ်လောက် ပေးမယ်ဆိုတာ သတ်မှတ် ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ဆုကြေးရဲ့ ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းကို ပေးသွားမလဲ ဆိုတာကိုပါ သတ်မှတ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Leach rate ကို ရှင်းပြထားတာကို သိပ်နားမလည်ပါဘူး။ တစ်ကယ်လို့ Leach rate က နည်းမယ် ဆိုရင် ခုခံတဲ့သူတွေကို reward points တွေ ပိုပေးမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ များမယ်ဆိုရင်တော့ တိုက်ခုက်တဲ့ သူတွေကို ပိုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့များ Legendary ဂြိုဟ်တစ်လုံးကို ဒီ Yamato မစခင်မှာ ရှာတွေခဲ့ရင်တော့ သင်ထီပေါက်သလိုပဲလို့ ယူဆလို့ ရပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဈေးပေါပေါနဲ့ မရောင်းမိဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ Yamato blue print ၁၀ ခုကို ပေးသွားမှာ စိုးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ရာသီကုန်မှာ reward point တွေကို Steem, Items နဲ့ Stardust တွေ အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပြောင်းပေးပြီးတာနဲ့ reward point တွေက သုည ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ Yamato ကလဲ လယ်ဗယ် သုည ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ Yamato အကြောင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ လယ်ဗယ်တွေအကြောင်းသိချင်ရင်တော့ @jarunik ရဲ့ simulator မှာ စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ ချီးမြှင့်မယ့် ဆုကြေးကတော့ Steem ၅၀၀၀၀ ခန့် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Yamato level 1
Yamato level 20
I just wonder who can beat this guy at lvl 20. The above four images taken from https://nc-client.jarunik.com .
Ref Link: https://steemit.com/nextcolony/@nextcolony/12-facts-about-the-yamato-module
@bobokyaw, @aggamun, @nayhlaingsoe, @hnineikhaing, @tunnaingwin, @naythan.